Jose Mourinho oo saadaaliyay afarta xul qaran ee gaari karta wareega semi-finalka Koobka Aduunka 2018 – Gool FM
(World Cup)12 Juunyo 2018. Macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa soo gaba gabeeyay rajadiisa kaga aadan koobka aduunka.
Jose Mourinho ayaa saadaaliyay 4-ta xulka qaran ee gaari doonto semi-finalka Koobka Aduunka, kahor inta uusan ka bilaawan khamiista soo aadan.
55 jirkn ayaa saadaaliyay in xulalka Portugal, Germany, Argentina iyo Brazil ay gaari doonaan wareega 4-ta ee koobka aduunka 2018 ee maalinta khamiista ka bilaabmi doona dalka Russia.
Sidoo kale Mourinho ayaa saadaal ka bixiyay wareega 16-ka in Portugal uu kasoo gudbi doono Uruguay, France ay garaaci doonto Nigeria, Brazil ay guul ka gaari doonto Mexico, England ay sidoo kale dhulka ku jiidi doonaan Poland, Spain iyo Ruushka, Jarmalka iyo Australiya Belgium ay kasoo bixi doonaan Senegal.
Macalinka Red Devils ayaa aaminsan in wareega quarter-finals-ka ay isku arki doonaan Argantina ay ka gudbi doonaan Spain sababa la xiriira in uu hogaaminayo halyayga Lionel Messi, sidoo kale Jose Mourinho ayaa saadaaliyay in Portugal uu soo dhaafi doono France sida dhacday finalka Euro 2016.
Mourinho ayaa saadaaliyay in England ay ku hari doonaan wareega 8-da sababa la xiriira Brazil, Germany uu guul ka gaari doono jiilka Portugal.
Macalinka reer Portugal ayaa la filayaa inuu koobka aduunka ka noqon doono falaqeeye Channel RT isla markaana uu kasoo muuqan doono inta uu socdo koobka aduunka 2018.
RASMI: Atletico Madrid oo ku dhawaaqday in kooxda Monaco ay kala heshiisay saxiixa Thomas Lemar